विश्वकप फुटवलः गोल्डेन बलको दाबेदार को ? | Sagarmatha TVSagarmatha TV विश्वकप फुटवलः गोल्डेन बलको दाबेदार को ? | Sagarmatha TV
काठमाडौँ । रूसमा जारी २१ औँ संस्करणको फिफा विश्वकप फुटबलबाट नयाँ पावर हाउस जन्मने पक्का भइसकेको छ भने यही विश्वकपले फुटबलको क्षेत्रमा धेरै उदयमान खेलाडी जन्माएको छ । विश्वकप सुरू हुनु अघि विश्वचर्चित खेलाडी लियोनल मेस्सी, रोनाल्डो तथा नेयमारलाई गोल्डेन बलका सम्भावित दाबेदारका रुपमा हेरिएको थियो ।
तर मेस्सीको अर्जेन्टिना अन्तिम १६ र नेयमारको ब्राजिल क्वार्टरफाइनलबाट बाहिरिएपछि गोल्डेन बलका लागि नयाँ खेलाडी दाबेदारका रुपमा देखा परेका छन् । जस मध्येका एक प्रमुख दाबेदार हुन् फ्रान्सका केलियन एम्बाप्पे । यसपटक विश्वकपमा प्रभाव पार्ने खेलाडी मध्ये खेलाडीको सूचीमा परेका एमबाप्पे जारी विश्वकपमा उच्च फर्ममा देखिएका छन् । समूह चरणमा पेरुविरुद्धको गोल विश्वकपमा उनको पहिलो गोल थियो ।
पेरिस सेन्ट जर्मेनका यी १९ बर्षीय खेलाडीले लियोन मेस्सी सम्मिलित अर्जेन्टिनाविरूद्धको प्रिक्वार्टरफाइनलमा उच्च प्रदर्शन गरेका थिए । जसमा उनले २ गोल गरे । यद्दपी उरुग्वेविरुद्धको क्वार्टरफाइनलमा भने उनको प्रदर्शन अपेक्षा गरिएभन्दा कमजोर थियो । त्यस्तै गोल्डेन जेनेरेसन मानिएको बेल्जियमले विश्वकपको सेमिफाइनलमा पुगेर आफुलाई थप प्रमाणित गरिसकेको छ । त्यसमध्ये पनि कप्तान इडेन हजार्डको प्रदर्शन प्रशंसनीय छ । उनले जापानसँगको प्रिक्वार्टरफाइनल र ब्राजिलविरुद्धको क्वार्टरफाइनलमा पनि निर्णायक भुमिका निर्वाह गरेका छन् ।
कठिन परिस्थितिमा पनि उनले निरन्तर प्रभावशाली प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यस्तै प्रभावशाली प्रर्दशनले हजार्डले आफुलाई जारी विश्वकपमा गोल्डेन बल उपाधीको दाबेदारका रुपमा उभ्याएका छन् । तीन खेलमा म्यान अफ दी म्याच बनिसकेका हजार्डले दुई गोल गर्नुका साथै दुई गोलमा असिस्ट गरेका छन् ।
त्यस्तै क्रोएसियाका कप्तान लुका मोड्रिचलाई पनि गोल्डेन बलको दाबेदारका रुपमा हेरिएको छ । क्रोएसियाले जारी विश्वकपमा उच्च प्रदर्शन गरिरहँदा कप्तान मोड्रिचको भूमिका महत्वपूर्ण छ । रियल म्याड्रिडका मिडफिल्डर मोड्रिच यो विश्वकपका उत्कृष्ट मिडफिल्डर मध्ये एक हुन् । रूसविरुद्धको उनको प्रदर्शन प्रशंसनीय रह्यो ।
उनले पनि जारी विश्वकपका तीन खेलमा म्यान अफ दी म्याच अवार्ड जितिसकेका छन् । यसअघि २०१४ मा ब्राजीलमा सम्पन्न २०औ संस्करणको विश्वकपमा योे उपाधी अर्जेटिनाका लियोनल मेस्सीले हात पारेका थिए । अर्जेन्टिनालाई विश्वकपको उपाधी जिताउन नसके पनि मेस्सीले प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्र्दे गोल्डेन बलको उपाधी पाएका थिए ।